AC taageere, taageere qaboojinta, taageere loo dabayn karo, DC taageere - HONGBO
EC Fan Taxanaha
YWF Taxanaha Axial Fan
HONGSHUO ururiyaha helay dhibaato ku meel gaar ah, AYATER caawin waqtigii i xaliyo, mahad aad u badan adeeg wanaagsan! My ururiyaha helay dhibaato ku meel gaar ah, Aya ter i caawi waxaa ku habboon, prventing dhumay naftayda, mahad aad u badan adeeg wanaagsan! My ururiyaha helay dhibaato xallin waqtiga, prventing dhumay naftayda, mahad aad u badan adeeg wanaagsan!
EC taageere taxane
rotor Dibadda taageere axial
taageere yar axial
Ningbo Hongbo Weite Motor Co., Ltd. waa takhasus u leh horumarinta iyo soo saarta AC, taageerayaasha axial DC iyo accessories taageere. Cuntooyinkan waxaa intooda badan codsatay in qalabka si toos ah gacanta, nidaamka awoodda, armaajooyinka, qalabka alxanka, Isgaarsiinta network qalab caafimaad oo alaabta iyo qalabka kale ee IT. Taageerayaasha Hongbo leeyihiin sifooyinka of raadinaya wanaagsan, hawada ballaaran, buuq yar yahay iyo cimri dheer. Waxaan si guul helay CE, Rohs ansixiyo. gabal kasta oo wax soo saarka Hongbo waa crystallization ah dadaal iyo xigmad Hongbo ee. Ka dib labaatan sano oo dadaal, Hongbo uu leeyahay tiro badan oo ah macaamiisha gudaha iyo dibaddaba iyo waxyaabaha waxaa si weyn loo dhoofiyo Europe, America, Bariga Dhexe, Afrika, Southeast Asia iyo dalalka kale, ka mid ah taas oo waxyaabaha our taagan tayada waqti-sharaf suuqa South Korean.
17040 172x150x40 mm shan garbaha axial taageere AC fo ...
AC taageere 17050B2H 220V 172 * 150 * 51mm ac taageere axial
20060 8 inji Machine Inner qaboojinta Axial Fan 20 ...
© Copyright - 2010-2017: Dhamaan Reserved Rights. Talooyin - Products Featured - Khariidadda bogga- Site Mobile
Small Fan , ilaalada taageere caag , Bir Impeller AC Axial Fan , Taageere dabayn , taageere socodka axial, 80mm Fan Guard, Все продукты